Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ihe Ozo
LB na-akọ akụkọ zuru ezu nke football Football bụ onye aha ya kacha mara amara "Dan". Nwa anyị Danilo na Silva Akụkọ ya na akụkọ na-ezighị ezi Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere anya ya. Otú ọ dị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara ọtụtụ banyere Danilo na Silva Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Na -Ndụ mbido
Malite ya, aha ya bụ Danilo Luiz da Silva. A mụrụ ya na 15th nke July 1991 nne ya, Maria José da Silva na nna, José Luiz da Silva na Bicas, obodo Brazil nke dị na steeti Minas Gerais.
Ezinụlọ ezinụlọ Danilo nwere mgbọrọgwụ si agbụrụ ojii Brazil nke nwere akụkọ banyere ajọ mbunobi na ọgụ maka ebe dị na ndịda America. Ndị Brazil na-enwe ọganihu dị ka Danilo bụ ndị na-adagharị ugbu a na-etinye aka n'alụmdi na nwunye a gwara ọgwa nke na-ebubata akpụkpọ anụ.
Danilo toro na Bicas, obodo ya na ndị bi na 13,000 na 3 awa dị n'ebe ugwu nke Rio de Janeiro.
Bicas dị ka e sere n'okpuru ebe a bụ ihe na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ ndị Ịtali na ndị mba ọzọ.
Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Na -Malite Ọrụ
Nye nwa okorobịa Danilo, ọchịchọ ya ịghọ ndị na-agbaso ụkwụ sitere na mkpali o nwetara site n'aka ndị akụkọ ntụrụndụ Edson Arantes do Nascimento onye a maara dị ka Pele.
N'ịbụ onye tolitere n'otu obodo ebe izu efu na-agwụ mgbe football nọ n'ụkwụ ya, ọ dị mfe nwa Danilo ịhọrọ football kama ịga ụlọ akwụkwọ. O doro anya, Danilo bụ 13 afọ mgbe ọ na-egwu bọl. Ọchịchọ ya maka football hụrụ ya na 2004 na-edebanye aha na ya na-eto eto na-eto eto, Tupynambás onye nyere ya ebe a na-egosi talent ya. Mgbe ọ na-eto eto, na-amụta ahịa nke onye nlereanya ya na onye na-emeri ụwa n'oge abụọ Cafu onye ihe ngosi ya kụziiri ya otú e si arụ ọrụ ya mma.
Mgbe afọ abụọ nke ịgba chaa chaa na-aga n'ihu na Tupynambás, Danilo chere na ọ dị mkpa igwu egwuregwu bọl. O kpebiri ịgafe n'akụkụ ndị ntorobịa América Mineiro dị na Belo Horizonte. Danilo hụrụ ka ụlọ ọrụ ahụ dị ka mmiri nke ga-eduga ya n'ọganihu ọganihu nke ndị ntorobịa.
Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Na -Bilie na-ewu ewu
Danilo mgbe ọ dị afọ 18 rụzuru ọrụ ntorobịa ya ma bulie ya na ndị isi América Mineiro. Ọ gbagoro elu karịa ndị isi football mgbe ọ kwusịrị ihe mgbaru ọsọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ dịghị oge tupu nnukwu ndị Brazil bụ Santos bịara kpọọ ya. Ọhụụ Daniello bilitere na Santos bịara n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ bịara n'otu oge, ọ meriri ihe mgbaru ọsọ ahụ meriri 2011 Copa Libertadores (South America Ẹkot UFA Champions League - ke akpa ini ebe 1963). N'okpuru ebe a bụ foto nke nnukwu nwa Danilo na Copa Libertadores.
Ebe ọ bụ na mmeri Copa Libertadores n'akụkụ Neymar (nke a na-ahụ n'okpuru ya na trophy), ikike Daniel nwere iji emeso onye a ma ama ama dị ka ụzọ o si eji bọl.
Nke a bụkwa oge ọtụtụ ndị Europe ji mara ya. Dị ka na 2012 January nyefee windo, klọb si Europe malitere ịkpọ maka ọrụ ya. N'agbanyeghi nkwekorita nke mmepu € 50 nde tinye n'isi ya, FC Porto gara n'ihu ịbanye ya, na-akwụ ụgwọ iwu ahụ na ịbanye akwụkwọ. Nke a bụ otú e si nweta nrọ ndị Europe. Ezumike ahụ, (oge na Real Madrid na Man City) dika ha na ekwu, bu ihe mere eme ugbu a.
Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Na -Ndụ mmekọrịta
N'okpuru nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. N'azụ Danilo na-enwe ọganihu, e nwere otu enyi nwanyị mara mma nke dị na Clarice Sales (nke dị n'okpuru ya na nwoke ya) bụ onye mechara tụgharịa nwunye ya ọ hụrụ n'anya.
Ndị enyi abụọ ahụ kpebiri ịmụ nwa tupu ha alụọ. Ha nwere nwa ha nwoke, bụ Miguel na 9th nke Eprel, 2015. N'okpuru ebe a, Danilo na nwunye ya mara mma na onye a mụrụ ọhụrụ Miguel na-eme ememe foto mbụ ya si papa ya.
Mgbe afọ 7 nọchara, Danilo na Clarice Sales mesịrị chee na ọ bụ oge iji kee eriri. Ha lụrụ na 17th ụbọchị nke June 2017 na Bicas, Brazil.
Both Danilo na Clarice gbara agbamakwụkwọ ha ọsọ ọsọ karịa ụbọchị ha zubere. Ha bu ụzọ kwuo ụbọchị agbamakwụkwọ ha na June 30, 2017, mana ha kpebiri ime ya n'ụbọchị 17 nke ọnwa nke 13 ụbọchị tupu ụbọchị agbamakwụkwọ ahụ.
N'okpuru ebe a ka foto agbamakwụkwọ ha na nwa ha, bụ Miguel. Dị ka a na-ahụ n'okpuru ebe a, ndị òtù ezinụlọ niile gụnyere Danilo na-amụmụ ọnụ ọchị na-adị mkpirikpi karịa nnukwu agbamakwụkwọ.
Danilo kwenyere na nwa ya nwoke bụ Miguel (nke dị n'okpuru ebe a) ga-eduga n'ọgbọ nke abụọ nke ezinụlọ Danilo Luiz da Silva.
Ndụ ndụ nke Danilo: Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ndụ Danilo nke nwere ike inyere mmadụ aka ịmepụta nkọwa zuru oke karịa àgwà ya. A hụwo Danilo ọtụtụ mgbe, na-ekpori ndụ oge dị mma.
Nwa nke Danilo da Silva Akụkọ nke Na -Ndụ nke Onye
Malite na ya, ndị Fans hụrụ ya dịka onye na-etinye nlezianya anya mgbe niile na ọbụna na foto ya na ezinụlọ ya.
N'ihi nke a, Danilo nwere ike ihie ụzọ dịka onye nwere ike inwe àgwà mkparị. Otú ọ dị, ịkụda ala miri emi, anyị na-enye gị ụfọdụ eziokwu banyere àgwà ya.
Banyere ike ya, Danilo dị ka ndị ọgbọ dị ka onye jidere ihe ọ bụla dị mkpa nye ya. Nke a pụtara ìhè n'ụzọ ọ na-arapara n'ahụ ezinụlọ ya dị ka a hụrụ na foto ndụ ya.
Danilo bụ ihe na-atụ anya (ya na n'elu ya), na-eguzosi ike n'ihe (ọtụtụ n'ime nwunye ya). Banyere ihe ọ masịrị ya, Danilo bụ onye na-akwado ihe omume ntụrụndụ nke ụlọ. Ọ na-achọ ịnọ jụụ n'akụkụ mmiri ma soro ezinụlọ ya rie ezigbo nri. Ihe ịrịba ama nke obe egbugbu na ogwe aka ya n'okpuru na-atụ aro na ọ sitere na ezinụlọ ndị Katọlik.
N'ihe banyere ihe na-adịghị amasị ya, Danilo adịghị eche ndị ala ọzọ ala. Ọ naghị achọ ịkatọ ndị nne na nna ya ma na-ekpughe ọtụtụ ndụ ya na ndị mmadụ. Dịka n'oge edere, a maara obere nwanne ya (nwanne), nwanne (s), nwanne nna ya na nwanne nne ya.
Dị ka n'oge edere isiokwu a, Danilo bụ onye bara ọgaranya nwere ọnụ ahịa zuru ezu karịa $ 21 nde. N'agbanyeghị Cafu ịbụ onye nlereanya ya, Danilo amaburu ihe ndị na-esonụ n'okwu ya;
Abụ m onye nke m. Agaghị m eji onwe m tụnyere onye ọ bụla n'ihi na m nwere àgwà m.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Danilo da Silva Child Plus Akụkọ nke Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Na-eme Ememe. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.